Farmaajo oo shir ku baaqey iyo Cadaadis la saarey | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo shir ku baaqey iyo Cadaadis la saarey
Madaxtooyadda Villa Somalia ayaa ku dhawaaqday in Farmaajo uu ku baaqey Shir kale oo looga hadli doono arrimaha khilaafka ka taagan ee doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqey shir kale oo uu la yeelan doono Madaxda Maamul Goboleedyada iyo duqa Muqdisho.
Farmaajo oo xaalad ku xuntahay hadda ayaa sheegay inuu qabanayo Shirkan 22-ka bishan oo ku aadan Isniinta, isagoo aan shaacin goobta uu kulanka ka dhacayo. KON ayaa ogaatay inay Madaxda ku kulmi doonaan xarunta Afisyooni ama meel kale oo Xalane katirsan.
Waa shirkii 3aad oo Farmaajo ku baaqo tan iyo December 2020, iyado kuwii hore ay fashilmeen kadib markii ay Madaxda Maamullada Puntland iyo Jubbaland ay diideen inay yimaadaan oo casuumaadiisa aqbalaan.
Farmaajo ayaa wajahaya mudooyinkii dambe cadaadis xooggan oo Beesha caalamka, gaar ahaan diblomaasiyiinta fadhiya Muqdisho ay ku hayaan, waxayna ku booriyeen inuu si deg deg ah heshiis ula gaaro dhinacyada kasoo horjeeda, si loo qabto doorasho wadar ogol ah, oo s nabad ah ku dhacda.
Qoraalka Villa Somalia oo soo baxay waxyar kadib War-saxaafadeedkii Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, ayaa lagu sheegay inuu Farmaajo ka dalbaday Madaxda Maamullada inay ahmiyad gaar ah siiyaan shirka, si loo dhameytiro heshiiskii Sep 17.
Baaqa Farmaajo wuxuu imaanayaa iyadoo Muqdisho ay maalin kahor looga dhawaaqay Gollaha Badbaado Qaran oo ay ku midoobeen Jubbaland, Puntland, Musharixiinta Mucaaradka iyo Siyaasiyiinta Somaliland kasoo jeeda.
Farmaajo isagaa ah dhibaatada doorashadda, haddana isagaa xalka raadinaya. Waa arin ugub ku ah siyaasadda Soomaaliya, waxaana muuqata inuu dalka qabsadey kaligii-yeiye cusub oo burburiyay nidaamkii dimuqraadiga lagu soo doortay Feb 8, 2017.